Madaxweyne Siilaanyo Oo Xil U Magcaabay Masuul Cusub Ka Hor Intaanu Ka Dhoofin Dalka | Araweelo News Network (Archive) -
Madaxweyne Siilaanyo Oo Xil U Magcaabay Masuul Cusub Ka Hor Intaanu Ka Dhoofin Dalka
Hargeysa(ANN)Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa maanta ka hor intii aanu dalka kaga bixin safarkiisa dalka Britain, wuxuu soo saaray Xeer uu ku magcaabay masuul cusub. Sidaana waxa lagu sheegay qoraal saxaafada loo qaybiyay oo kasoo baxay
xafiiska Af-hayeenka madaxtooyada Somaliland.
Qoraalka madaxweynuhu ku magcaabay masuulkaa ayaa u qornaa sidan:- “Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxa uu Xeer Madaxweyne oo Numberkiisu yahay 0199/022012 ku magacaabay Madaxa Xafiiska Xidhiidhiyaha Jaaliyadaha Somaliland.
In Mudane, Maxamuud Cabdiraxmaan Cali, laga bilaabo taariikhda maanta 18.02.2012 uu ahaado Madaxa Xafiiska Xidhiidhiyaha Jaaliyadaha ee Somaliland. Xaafiiskaas oo hoos imanaaya maamulka Wasaaradda Arrimaha Dibedda.” Ayaa lagu yidhi qoraalka kasoo baxay xafiiska Af-hayeenka Madaxtooyada.